Fomba ahazoana vola amin'ny lafiny ilany - tsy misy asa momba azy - Финансовый форум | Всё про деньги, финансы, инвестиции, заработок
Fomba ahazoana vola amin'ny lafiny ilany - tsy misy asa momba azy
Сообщение Yortvandy8899 » 04 фев 2020, 14:12
Raha nanao fikarohana an-tserasera momba ny fomba hahazoana vola ianao, dia nahita fa misy valiny an-tapitrisany amin'ny valiny an-tapitrisany. Taiza ianao no manomboka? Raha toa ahy ianao dia mamela ny zavatra tiana ny fahaizanao ankehitriny. Miaraka amin'ny fitaizana zaza telo ho toy ny asako manontolo andro, dia tsy tena manam-potoana hanaovana ezaka be hafa amin'ny asa hafa aho, ankoatra ny matory.paoypaet.com
Tsara ny varotra mofo. Mila fotoana sy ezaka anefa izany. Hihinanan'ny zanako ny zava-drehetra alohan'ny hamarenako azy vao amidy.
Tsy fantatro ny momba anao, fa tsy misy mahaliana ahy amin'ny tsenam-bola. Voalohany indrindra aloha dia mila vola izay tsy tokony hanombohako. Avy eo ianao dia mandoa ny vaomiera sy ny sarany ambonin'izany. Aorian'izany dia miandry amin'ny fitadiavanao vola ianao. Tsy manana faharetana aho. Tsy te hiandry telo na efa-taona aho handany vola amin'ny volako mafy. Te-hiverina aho izao.
Etsy dia ho an'ny vahoaka fetsy. Azonao atao ny mivarotra ny karazana tetik'asa rehetra ao. Raha toa ianao ka artsy ary manana fotoana hiasana amin'ny zavatra toy izany, mety ho safidy tsara io. Ary indray, ho ahy, tsy manam-potoana hanaovana asa tanana amin'ny asa tanana aho. Azoko atao ny mametaka lavaka ao anaty lamba, fa izany no fahaizako.
Nanandrana ny làlan-jotra maharitra ho ahy aho. Nanandrana nanomboka orinasa fandrindrana mariazy aho. Mipetraka ao amin'ny tanàna kely iray aho ary nanapa-kevitra hanomboka pejy Facebook hanandrana hisarihana ny mpanjifa. Notolorako ho an'ny namako iray ny fampakaram-bady iray ary tetikasa izany. Marefo ary sarotra izany. Tsy dia ratsy loatra ilay andro. Ny drafitra sy fandrindrana rehetra izay nitranga talohan'ny fampakaram-bady izay nahafaty ahy.